Hanihany Amin’ny Vata Fampangatsiahana, Mamazivazy Fitiavan-tanindrazana Tafahoatra Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2015 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, Deutsch, Italiano, Español, English
Afisin'ny fampielezan-kevitra Revolisiona Ara-kolontsaina. Azon'ny rehetra ampiasaina
Nahazo ompa tao amin'ny aterineto ilay mpihira Amerikana-Taiwaney malaza Christine Fan tamin'ny herinandro lasa rehefa avy nampiditra ny sarin'ny zanany kambana nandritra ny matson'ny miaramila tamin'ny Ady Lehibe Faha-2 tao Shina. Ny heloka vitany, araka ny resabe dia noho izy tsy dia tia tanindrazana loatra, na dia Amerikana aza ny zom-pirenen'i Fan ary tsy tanindrazany i Shina
Nofafan'i Fan tamin'ny farany ny sary ary niala tsiny izy. Manelingelina ny Shinoa maro ny fampisehoana fankahalana amin'ny anaran'ny fitiavam-pirenena, indrindra amin'ny fotoanan'ny matso izay natao hanasongadinana ny fahavonan'i Shina hiady amin'ny fasisma tamin'ny vanim-potoana, izay nampiroborobo ny endrika mahery vaikan'ny nasionalisma.
Ho an'ny sasany, fampahatsiahivana ny fomba fiteny malaza nampiasaina nandritra ny Revolisiona Ara-kolotsaina, hetsika ara-politika mahery vaika tamin'ny 1960 sy 1970 izay nikendry hametraka indray ny fahefan'ny Antoko Kaomonista Shinoa sy handroaka ireo tsy irina ao amin'ny fiarahamonina izany. Midika izany fa na dia ireo lohahevitra mahazatra indrindra amin’ny resaka aza dia manomboka amin'ny fanambarana mitafotafo momba ny fitiavan-tanindrazan'ny tsirairay.
Nidiran'ny fitaovana an-dakozia ny fitiavan-tanindrazana Shinoa
Rehefa voavelively i Fan, dia naka tahaka izany karazana firesahana amin'ny media sosialy Shinoa malaza, Weibo, izany ilay mpanoratra malaza Li Haiping :
Ho ela velona anie ny tanindrazana, iza no mahafantatra orinasa mivarotra vata fampangatsiahana malalaka sady fisaka?
Nahasarika valinteny an'arivony nosoratana tamin'ny endrika mitovy aminy ny fanontaniana. Indrisy, nofafan'ireo mpanivana haingana ny lahatsoratra noho izy tsy marina ara-politika. Ankoatra ny fanivanana ireo teny saropady, mety hamafana lahatsoratra mora foana ihany koa ny tatitra avy amin'ny olona tahaka ny “mpilatsaka an-tsitrapo ara-tsivilizasiona” amin'ny votoaty saropady ara-politika. Naverina nadika tao amin'ny China Digital Times ny votoaty sasany ary nofantenana nadika hita eto ambany :
Tohano ny vokatra ao an-toerana ary ialao ny vokatra Japoney, tokony hijery ny matson'ny miaramila ny rehetra! mbola mahatsiaro ihany aho fa tsara kokoa ny vata fampangatsiahana Panasonic……
Ny antoko kaomonista no tsara indrindra! Manana haavo eo amin'ny 65 sentimetatra ny vata fampangatsiahana Haier, ny fisaka indrindra
Tigra taratasy ny imperialista rehetra. Aza mividy vokatra vita Shinoa [anisan'izany ny vata fampangatsiahana].
Mahomby hatrany ny ain-tsaranga. Iray amin'izany ny Hisense, saingy ny varavarana no tsy hakatona mafy?
Ny zava-dozan'ny fitiavan-tanindrazana tafahoatra
Tao amin'ny Weibo, profesora Hu Xingdou ao amin'ny Oniversiten'i Beijing nanazava fa ny fironana amin'ny fitiavan-tanindrazana tafahoatra dia mampidi-doza ara-tantara:
Raha nanontaniana momba ny raharahan'ilay mpihira niharan'ny herisetran'ny mpiserasera aho dia namaly fa ny fitiavan-tanindrazana tafahoatra tsy misy fahalalana tahaka ny mpanao ady totohondry sy Nazi no manana fahefana fandravaravana sy mitarika hatrany any amin'ny nasionalisma sy ny fasisma tafahoatra. Loza goavana indrindra ho an'i Shina ankehitriny ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanindrahindram-pirenena tafahoatra. Tokony hatsahatr'ireo mpanao politika tompon'andraikitra ny fielezan'izany ary tarihina ny olona hiverina any amin'ny soatoavina manerantanin'ny olombelona, ​​manakana ny firenena tsy hivarina any amin'ny lalan-dratsin'ny mpanao ay totohondry na Revolisiona ara-Kolontsaina.
Ny Fikomian'ny mpanao ay totohondry (1899 sy 1901) dia fikomiana manohitra ny imperialista amin'ny fiezahana mandroaka ny vahiny rehetra tao Shina amin'ny alalan'ny herisetra. Nokarakaraina amin'ny endrika fikambanana ara-pivavahana miafina ny mpanao ady totohondry, antsoina hoe Yihequan izay midika hoe “Totohondry Marina sy Mirindra” amin'ny teny shinoa ary nanomboka nanafika ireo vahiny amin'ny alina ao amin'ireo tanàna lehibe izy ireo mba haneho ny fahatezerany amin'ny fananiham-bohitry ny vahiny.
Naverin'ny maro ny hevitr'i Hu, tahaka ilay mpanao matoandahatsoratry ny Financial Times ao Shina “Bitro Anti-Maola”:
Manery amim-pihorakorahana ny hafa ho tia ny fireneny- ho tia ny firenen'ny lehiben'izy ireo ny fasista. Mahagaga fa lasa heloka bevava ao Shina ny tsy fitiavan-tanindrazana.
Matahotra ny sasany ao Shina fa ny fitiavan-tanindrazana dradradrain'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ara-tsivilizasiona an-tapitrisany” ao amin'ny aterineto eo ambany fitantanan'ny Ligin'ny Tanora Kaomonista dia mety hampiroborobo ny fitomboan'ny fahefana elatra ankavia sy mitarika ny fitsanganan'ny Revolisiona Ara-kolotsaina indray. Amin'ny alalan'ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana mahery setra ataon'izy ireo, manasa ireo olona ireo mba handinika ny fieritreretany mahatsikaiky manokan'izy ireo tsirairay avy i Li Haipeng. Eo ny fanantenana hahazoana an-tsaina ny tantara – sy ny mampihomehy.